Ọkachamara Semalt: Nwere ike ịzụ ahịa ahịa SEO dị ka okpu okpu?
Ọrụ ọ bụla nwere ike ịba uru na ịnweta saịtị weebụ na-aga nke ọma. N'ihi ya, ọ dị oké mkpa maka ọtụtụ webmasters iji tinye usoro mgbasa ozi na ebe nrụọrụ weebụ nke nwere ike iru ọtụtụ mmadụ. Ịntanetị na-enye ndị niile na-ere ákwà otu ihe nzụlite nkịtị maka ịzụ ahịa na azụmahịa ha yana ime mgbanwe ndị ọzọ dị mkpa na arụmọrụ nke ebe nrụọrụ weebụ ha. Usoro ntanetịcha nwere ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ nweta ezigbo ọkwa na SERP nke ụfọdụ isiokwu. Ọnọdụ a bụ obi nke ọ bụla ahịa ahịa atụmatụ. Imirikiti ụlọ ọrụ SEO na ndị ahịa nwere ike inye ndokwa maka SEO mpaghara dịka ọtụtụ ndị ọzọ usoro azụmahịa - studio lighting kits photography accessories prices.
Search Engine Optimization (SEO) nwekwara ike ịbụ a bara uru isi na-eme ka a website mezuo ihe mgbaru ọsọ chọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enweta ọnụ ahịa ahịa ha site na ahịa ahịa ụlọ ahịa. Usoro a bụ ụdị nke SEO pụtara na ọ na-eme n'ime iwu nke ịme mgbasa ozi ahịa dijitalụ. Enwekwara ọtụtụ ndị mmadụ na-agbanwe mgbanwe ha na-ere n'ịntanetị n'ihi na ha nwere ike ịme nnukwu ahịa site na ohere a. E nwere ọtụtụ ihe mere nwere ike ime ka SEO dị n'ụdị ụzọ ejiji ọcha .
Michael Brown, Onye Ọrụ Gbanwee Ọrụ nke Semalt , na-enye nghọta ụfọdụ n'ime ihe ndị kacha mma na-acha ọcha akpụkpọ mpaghara SEO omume:
Mmetụta enyi na enyi
Ịmepụta mkpokọta ebe nrụọrụ weebụ na-eji ejiji ọhụụ bụ nke nwere ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ jikwa mmekọrịta siri ike dị n'ịntanetị yana mmekọrịta dị ogologo na ndị ahịa. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ịntanetị n'oge a na-eji ekwentị mkpanaaka. N'oge na-adịghị anya smartphones ga-anọchi ọtụtụ kọmputa desktọọpụ karịsịa n'ime nchọpụta zuru ezu na ịme nchọgharị n'ịntanetị. Ndị na-ere ahịa na Ịntanet ga-eme ka ebe nrụọrụ weebụ ha na-eme njem na ebe nrụọrụ weebụ na-eme ka ndị nleta na-enweta ọdịnaya ha site na smartphone nwere ezigbo ahụmahụ. Ọzọkwa, Google mere mgbanwe a na Penguin algorithm na Jenụwarị 2017. Nwelite a pụtara na ịmepụta mkparịta ụka enyi na ebe nrụọrụ weebụ ga - abụ ezigbo ihe ị ga - atụle.
Ahụmahụ onye ọrụ na-akọwa ọganihu nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Dịka ọmụmaatụ, ebe nrụọrụ weebụ nke na-eme ka onye ọrụ nwee mmetụta dị mma nwere ike ime ka mmadụ nwee oge mmekọrịta dị elu karị na otu nke na-enweghị ọrụ UX. N'otu aka ahụ, nzaghachi ndị mmadụ na UX gị nwere ihe jikọrọ ọnọdụ na ebe nrụọrụ weebụ a ga-etinye na ogo. Ọ dị mkpa ịmepụta otu njirimara ọrụ njirimara nke na-arụ ọrụ n'otu oge ahụ dị mkpa. Imirikiti nke nkà na ụzụ njikwa search engine na-emegharị na-eme ka onye nleta nweta afọ ojuju mgbe ị na-eme nchọgharị na ebe nrụọrụ weebụ gị maka ọdịnaya dị iche iche.
Ịntanetị nwere ọtụtụ onyinye maka onye dị njikere itinye ego dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, azụmahịa nwere ike ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ azụmahịa na aha ọma n'ọhịa ha na-arụ ọrụ. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ụlọ ọrụ na-enweta uru nke azụmahịa ahịa ahịa ahịa. Ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ SEO ndị nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka na netwọk n'ịntanetị nwere ike ịgụnye ụzọ dịka nchọpụta isiokwu na nkwado azụ. Ọrụ SEO ndị a bụ ihe ziri ezi, ndị mmadụ na-echekwa na ha bụ ụzọ ejiji ọcha, nke nwere ọtụtụ abamuru nye onye na - eji ha eme ihe.